Bogga ugu weyn » Wararka Dalxiiska » Waddan ay Safarka Mareykanka ku jiraan lambarrada rikoodhka ah oo aan su'aalo la weydiinin
Waddan ay Safarka Mareykanka ku jiraan lambarrada rikoodhka ah oo aan su'aalo la weydiinin
Duulimaadka Mareykanka ama Ruushka ee Turkiga wax dhib ah ma leh. Qaar badan oo ka mid ah duulimaadyada Turkish Airlines ee ka baxa albaabbada laga soo galo Mareykanka ayaa la taga culeysyo wanaagsan. Waa sababta oo ah labada Mareykan iyo qorayaasha Turkiga runti dan kama lihi.
Helitaanka ilkaha ama qalabka timaha lagu rakibo ayaa ah sababta rasmiga ah ee soo booqdayaal badan oo Mareykan iyo Ruush ah, adeegyadan oo kale ayaa lagu heli karaa gorgortan ka dhaca Turkiga.
Weriye eTN ah oo dhawaan ka duulay Mareykanka una aaday Turkiga ayaa sii joogay 2 toddobaad oo uu soo laabtay lamana weydiin wax ku saabsan heer kulkiisa iyo sida uu dareemay.
Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa weydiisay isaga oo jooga magaalada Honolulu markii uu u duulaayay magaalada Chicago ee ku saabsan COVID. Marka Chicago mar dambe ma jirin su'aalo.
Markuu soo laabtay, wuxuu hubiyay boorsooyinkiisa magaalada Istanbul ilaa Los Angeles duulimaadkiisii ​​Turkish Airlines ee Munich iyo United Airlines ilaa San Francisco iyo Los Angeles. Qofna weligiis ma weydiin sida uu dareemayo. Mas'uuliyiinta Jarmalku uma oggolaan inuu hinto waddanka tan iyo markii uu ka soo duulay waddan halista badan leh (Turkiga) una aaday waddan halista sare leh (USA)
Wuxuu raacay diyaarad ay leedahay shirkada duulimaadyada ee United ee magaalada Munich isagoon wax su’aal ah qabin wuxuuna soo maray socdaalka iyo kastamka mudo 2 daqiiqo ah Looma baahna baaritaanka COVID,
Waxay sharxi kartaa sababta booqdaha koowaad ee Turkiga ay uga yimaadeen USA iyo Ruushka waqtigan.
Istanbul waxay noqotay magaalo mashquul badan. Baararka hadda waa la xiro dhamaadka usbuuca, laakiin had iyo jeer waxaa jira waxyaabo badan oo ka reeban, iyo saraakiil badan oo booliis ah oo leh indhoolayaal badan oo indho la'aan ah.
Dalxiiska Turkiga horay ayuu usocdaa booqdayaashuna waxay jecelyihiin inay u safraan wadan dhib badan uusan kajirin. Ha ka welwelin inaad ku xirto wejiyadaha basaska indha indheynta.
Isha kaliya ee la furayaa waa marka la duulayo duulimaadkan u dambeeya ee ka socda Los Angeles ilaa Honoluluy. Tijaabada 'COVID-19' ayaa loo baahan yahay mana ka weynaan karto 3 maalmood. Si kastaba ha noqotee tijaabooyinka noocan oo kale ah waa kuwo aan macquul aheyn in la helo. Weriyahayagu wuxuu ku guuleystey inuu imtixaan ka qaado kaliya inuu aadayo farmashiye isagoon ballan lahayn, laakiin natiijada waxay qaadatay hal toddobaad inuu kusoo laabto. Waxaa laga codsaday Honolulu inuu ilaaliyo karantiil 14 maalmood ah.
Haatan Turkigu wuxuu beddelay qaabkii uu u soo tebin jiray maalin kasta COVID-19 infekshannada, wuxuu xaqiijiyay waxa kooxaha caafimaadka iyo xisbiyada mucaaradka ay muddo dheer ka shakiyeen - in waddanku la soo dersay xaalado argagax leh oo naxdin leh oo daal badan ku haya nidaamka caafimaadka Turkiga.
Waji ka waji, dowladda Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan toddobaadkan waxay dib u bilowday inay ka warbixiso dhammaan baaritaannada wanaagsan ee coronavirus - ma ahan oo keliya tirada bukaanada laga daaweynayo astaamaha - iyadoo riixeysa tirada kiisaska maalinlaha ah in ka badan 30,000. Xogtan cusub, waddanku wuxuu ka booday inuu noqdo mid ka mid ah waddamada ugu yar ee ay saameynta ku yeelatay Yurub wuxuuna u gudbay mid ka mid ah kuwa ugu daran.
Taasi wax la yaab leh kuma noqonin Ururka Dhakhaatiirta Turkiga, oo muddo bilooyin ah ka digayay in tirooyinkii hore ee dowladda ay qarinayeen culeyska faafitaanka iyo in daahfurnaan la'aantu ay gacan ka geysaneyso kor u kaca. Si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay ku adkeysanaysaa, in tirooyinka wasaaraddu ay weli hooseeyaan marka la barbar dhigo qiyaastii ugu yaraan 50,000 oo cudur cusub maalin kasta.
Ma jiro waddan soo sheegi kara tirooyinka saxda ah ee faafitaanka cudurka tan iyo markii kiisas badan oo astaamo aan la ogaan la ogaan karin, laakiin qaabkii hore ee loo tiriyey ayaa ka dhigtay Turkiga mid u muuqda inuu kufiicanyahay isbarbardhiga caalamiga, iyadoo maalin walba kiisas cusub oo aad uga hooseeya kuwa laga soo sheegay dalalka Yurub oo ay ku jiraan Talyaaniga, Ingiriiska iyo Faransiiska.
Taasi waxay isbadashay Arbacadii iyadoo kiisaska maalinlaha ah ee Turkiga kudhawaad ​​afar laabmay laga bilaabo 7,400 ilaa 28,300.
Isbitaalada dalka aad ayey u balaadheen, shaqaalihii caafimaadka way gubteen oo qandaraaslayaashii raadraaca, oo mar uun loo aqoonsaday inay ilaalinayaan cudurka dillaacay, waxay la halgamayaan raadinta gudbinta, Sebnem Korur Fincanci, oo ah madaxa ururka ayaa u sheegay Associated Press.
In kasta oo wasiirka caafimaadku uu dhigay heerka sariirta ICU-ga ee 70%, Qofka masuulka ka ah Ururka Kalkaaliyayaasha Caafimaadka ee Intensive Istanbul oo xaruntiisu tahay Istanbul, wuxuu leeyahay sariiraha qaybta daryeelka degdegga ah ee isbitaalada Istanbul waxay ku dhow yihiin inay buuxsamaan, iyadoo dhakhaatiirtu ay isku dayayaan inay helaan meel bukaanka halista ah.
Waxaa jira kalkaaliyayaal caafimaad oo yaraaday shaqaalihii kalkaalisooyinka ee hada jirayna way daalan yihiin.
Dhimashada rasmiga ah ee maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa sidoo kale si isdaba joog ah kor ugu kacday tirada, taasoo gaartay 13,373 Sabtidii iyadoo 182 dhimasho cusub ah, taa bedelkeedana nasiib u yeeshay dalka lagu amaanay maaraynta in dhimashooyinka ay hooseeyaan. Laakiin tirooyinkaas diiwaanka ayaa wali lagu muransan yahay.
Duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu ayaa sheegay in 186 qof ay u dhinteen cudurada faafa ee magaalada november 22 - maalin ay dowladu ku dhawaaqday kaliya 139 COVID-19 oo u dhintey dalka oo dhan. Duqa magaalada ayaa sidoo kale sheegay in qiyaastii 450 aas ay maalin walba ka socdaan magaalada 15 milyan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 180-200 la duubay bishii Nofeembar ee sanadkii hore.
Koca ayaa sheegtay in tirada bukaanada sida daran u xanuunsanaya iyo kuwa u dhinta ay sii kordhayaan waxayna sheegtay in magaalooyinka qaar oo ay ka mid yihiin Istanbul iyo Izmir ay la soo dersayaan "meeshii ugu saraysay ee sedexaad" Si kastaba ha noqotee, Turkiga waxay sugi lahayd, si kastaba ha noqotee, muddo laba toddobaad ah si ay u aragto natiijooyinka bandowga dhammaadka usbuuca iyo xaddidaadaha kale ka hor inta aysan tixgelin xiritaanka adag, ayuu yidhi.
Dhanka kale, dalku wuxuu heshiis la galay in la helo 50 milyan oo qaadasho oo ah tallaalka oo ay soo saartay shirkadda dawooyinka ee SinoVac ee Shiinaha waxayna rajeyneysaa inay bilawdo maamulkeeda shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa sida joogtada ah u xanuunsanaya bisha soo socota. Waxay sidoo kale ku jirtaa wadahadallo lagu iibsanayo tallaalka ay soo saartay Pfizer iyadoo kaashanaysa shirkadda dawooyinka ee BioNTech. Tallaal uu soo saaray Turkiga ayaa loo qorsheeyay inuu diyaar u noqdo isticmaalka bisha Abriil.